Fantatra tamin’izany fa nasaina nampitsahatra avy hatrany ny asany ity ozinina ity izay efa nanao andrana in-droa ka nankarary olona mihoatra ny fito ary zaza vao herintaona monja ny iray. Mbola nisy ihany anefa ny di-doha nataon’ilay teratany sinoa tompony ka nisy indray ny fampitandremana voarainy ny faran’ny herinandro teo. Miditra amina dingana hafa indray anefa izy ireo rehefa tsy nahazo rariny tamin’ireo tompon’andraikitra. Raha araka ny feo ren’ireo fokonolona monina eny Ankazobe Alasora dia mampanangon-tsonia ireo olona monina eny an-toerana indray ilay teratany sinoa, olona izay voalaza fa karamainy 50.000 Ar tsirairay mba hilaza sy hanamafy fa ilainy ity orinasa ity hahafahana miady amin’ny tsy fananan’asa misy eto amintsika. Nomarihin’ireo mponina omaly anefa fa tsy hiasa amina orinasa mpanimba ny tontolo iainana sy mpamono olona tahaka ity orinasa mpanodina goudron ity ny taranany. Takian’izy ireo hatrany, araka izany, ny hanalana tsy misy hatak’andro ity orinasa iray ity eny an-toerana. Ankoatra ny mponin’Ankazobe Alasora, hoy izy dia ho lasibatra daholo ny mponin’Antananarivo noho ireo faikana goudron tsy maintsy alefa ao amin’ny ranon’Ikopa izay mandalo eny an-toerana.